‘पोक’मा परिवर्तन- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — फेसबुकको सुरुदेखिकै फिचर हो– पोक । पोक केका लागि प्रयोग गर्ने कुनै नियम छैन । फेसबुक प्रयोगकर्ताले अन्य प्रयोगकर्तालाई पोक गर्ने चलन छ तर पछिल्लो समय यसको प्रचलन घट्दै छ ।
फेसबुकले अब भने पोकको फिचर परिवर्तन गरेर अन्य अप्सन थप्ने भएको छ । जहाँ पोक गर्दा हाइफाइभ, हाई, वेबजस्ता फिचरहरू रहनेछन् । यसको नाम भने पोकको सट्टा ‘हेल्लो’ हुनेछ ।
फेसबुकले बेलायत र थाइल्यान्डका प्रयोगकर्ताबीच यसको प्रयोग गरिरहेको छ । मोबाइल एपमा हरेक व्यक्तिको प्रोफाइलमा हेल्लो बटन रहनेछ भने वेब भर्सनमा पनि सोहीअनुसारको डिजाइन हुने फेसबुकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७४ १०:२३
एप्पलले किन्यो शाजम
काठमाडौं — गीत पहिचान गर्ने एप शाजमलाई एप्पलले किनेको छ । दुवै कम्पनीले यसको पुष्टि गरेका छन् तर रकम भने खुलाइएको छैन । शाजम यसअघिदेखि नै एप्पलको सिरिजसँग जोडिएको छ ।
शाजम एप प्रयोगकर्तामाझ गीत पहिचान गर्ने एपका रूपमा चर्चित छ । जस्तो, कुनै पार्टी वा कतै कुनै गीत सुनियो तर उक्त गीत कुन हो ? कसको हो ? थाहा छैन भने शाजमले उक्त गीतको ट्रयाकको भरमा गीतको पहिचान गर्न सक्छ ।
एप्पलले शाजमलाई आफ्नो म्युजिक स्ट्रिमिङ सर्भिस एप्पल म्युजिकसँग जोड्नेछ । पछिल्लो समय एप्पल म्युजिकको प्रयोगकर्ता बढ्दै गए पनि यो स्पोटिफाईजस्ता एपसँग प्रतिस्पर्धामा पछि छ । एप्पलले सन् २०१५ देखि एप्पल म्युजिक सुरु गरेको हो ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७४ १०:२२
द्रुतगतिमा गुड्ने सुपरसोनिक हाइपरलुप क्याप्सुल बन्यो
अब कारमा चढेर उड्ने दिन आयो !
‘पोर्न साइट’ बन्द गराउन मन्त्रालयको निर्देशन
टचस्क्रिनसहित रोल गर्न मिल्ने ट्याबलेट
तीन आइफोन सार्वजनिक